Rasmi: Filimka Mubarakan Iyo Maalintiisa 5-aad Lacagaha Uu Keenay | Filimside –
Rasmi: Filimka Mubarakan Iyo Maalintiisa 5-aad Lacagaha Uu Keenay
Aug 2, 2017 - jawaab
Taariikh: August 2, 2017:
Filimka weyn ee shactirada badan Mubarakan ayaa sameeyay ganacsi fiican maalintiisa 5-aad oo la mid ah midkii uu sameeyay maalintiisii 4-aad.
Sida shabakada Boxoffice India soo daabacday Mubakaran wuxuu Talaadadiisa kowaad keenay 3.50 Crore (Trade Figure) waana ganacsi fiican balse dhibka heesto filimkaan waxay tahay in lacago qaali ah lagu sameeyay sidoo kalena maalintiisii kowaad ganacsi aad u liito ku bilaawday.
Mubarakan mudo 5-maalmood wuxuu soo xareeyay 29.50 Crore sidoo kalena labada maalmood ee todobaadka ka harsan wuxuu keeni doonaa 6 Crore taasi oo ka dhigan in todobaadkiisa kowaad filimkaan keeni doono 35 Crore.
Mubarakan waxaa lagu qarash gareeyay 70 Crore sidaa darteed wuxuu u baahan yahay ugu yaraan labo todobaad oo dheeri ah inuu tiyaatarada baaqi kusii ahaado balse midaas uma suura galeyso madaama tiyaatarada loo baneyn doono labada filim ee waa weyn Jab Harry Met Sejal iyo Toilet Ek Prem Katha.
Fadlan hoos kaga bogo Mubarakan lacagaha uu keenay 5-tiisa maalmood ee ugu horeyso:
Jimco – 5 Crore
Sabti – 7.25 Crore
Axad – 10.25 Crore
Isniin – 3.50 Crore
Talaado – 3.50 Crore
Wadarta Guud – 29.50 Crore (Trade Figure)
Dhinaca kale filimka Indu Sarkar oo ay wada jilayaan Kirti Kulhari, Neil Nitin Mukesh, Anupam Kher, Tota Roy Chowdhury iyo Supriya Vinodayaa ganacsi liito sameenayo wuxuuna todobaadkiisa kowaad keeni doonaa 4.50 Crore ilaa 4.75 Crore.
Fadlan hoos kaga bogo Indu Sarkar lacagaha uu keenay mudo 5-maalmood ah:
Jimco – 85 Lakh
Sabti – 1.05 Crore
Axad – 1.35 Crore
Isniin – 40 Lakh
Talaado – 35 Lakh
Wadarta Guud – 4 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqriyay: 1,010